आजको राशिफल! भाद्र २४ बिहिवार । पाथीभारले कल्यान् गरुन् ॐ:: Mero Desh
आजको राशिफल! भाद्र २४ बिहिवार । पाथीभारले कल्यान् गरुन् ॐ
Published on: २४ भाद्र २०७८, बिहीबार ००:००
मेषः बल तथा पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । साथीभाईहरुको साथ सहयोगमा जटिलकार्यहरु सम्पादन हुनेछन् । धार्मीक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रको लापरवाहिले माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबनाका कारण कार्य क्षेत्र मा सामान्य अप(जसको सामना गर्नु पर्ला’ । भौतिक साधनका क्षेत्रमा सामा”न्य खर्च हुन “सक्ने ‘छ ।
बृषः धर्म र आध्या’त्मतिर मन जानेछ । वाणिका कारण आफन्तजनहरु रिसाउन सक्नेछन् । भोजभतेर जन्यकार्य मा सह’भागीताको अवसर जुट्नेछ स्वास्थमा सामान्य समस्या देखापर्ने सम्भाबना रहेकोछ ।सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । आम्दानिका श्रोत फेला परेता पनि अल्छिपनले भने सताउनेछ ।
मिथुनः पारिवारिक साथ सहयोग द्वारा ब्यपार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । गरीरहेका कार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । सभास’म्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको अवसर जुट्नेछ । गरीरहेको कार्यका क्षेत्रमा सामान्य वादविवादको सम्भाबना रहेकोछ । प्रेम”मा भने प्रगाढता छाउनेछ । पूजा तथा धार्मिक कार्यमा सहभागी भइनेछ ।
कर्कटः शुभ चिन्तकहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन् । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भा बना रहेकोछ । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । प्रतिश्पर्दाजन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहने योग रहेकोछ ।
सिंहः नयाँ लगानिका निम्ती समय उत्तम साबित रहनेछ । आयआर्जनका बिभीन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन् । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुने योग रहेकोछ । अध्ययन अध्यापनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना समेत रहनेछ” ।
कन्याः भौतिक श्रोतसाधनका्े प्रयोगमा समय ब्यतित रहने छ । स्थीर क्षेत्रमा गरिएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । सभासम्मेलन तथा सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहने योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा कमि महसुस रहनेछ । गरीरहेको कार्यबाट मान सम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ ।
तुलाः बिश्वासिला मित्रजनहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । गरी रहेका कार्यमा सामान्य तना वको सामना गर्नुपर्नेछ सबारी साधनको यात्रामा बिशेष सजग रहनुहोला गरिरहेको कार्य मा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । सामाजिक कार्यको बिशेष दायित्व हात लाग्ने सम्भाबना रहेकोछ । धार्मिक अनुष्ठान मा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ “।
बृश्चिकः स्थीर क्षेत्रमा लगाईएको आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । आफन्तजन बिचको भेटघाट ले मन प्रशन्न रहला ।सभा सम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागी ताको योग रहेकोछ । खानपानमा बिषेश साबधानि अपना उनु होला । अरुको अनुशरणले तपाईलाई समान्य झ न्झ ट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ । पूजापाठमा सहभागिता हुनेछ ।
धनुः तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आर्कशित हुने योग रहेको छ । जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसा यमा सुधार आउनेछ नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
मीनः कार्य सम्पादनमा दृणताको कमिले अधिक श्रम” खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थका क्षेत्रमा भने सामान्य सुधार आउनेछ । परीवारका सदस्यहरु सग क्षणीक बियोग को सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिस्पर्धा जन्य कार्यमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला’ ।